Puntland oo shuruudo kakan ku xirtay ka qeybgalka shirka doorashada | Biyoguurenews.com
Home Wararka Puntland oo shuruudo kakan ku xirtay ka qeybgalka shirka doorashada
Puntland oo shuruudo kakan ku xirtay ka qeybgalka shirka doorashada
War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka. Garowe ayaa shuruudo ku xirtay ka qeybgalka shirkii doorashada ee uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Puntland ayaa sheegtay inay jiraan qoddobo muhiim u ah hiregelinta doorashada, waxaana ay intaa raaciyeen in laga mamaarmaan ay tahay in la sameyo qoddobadaas, si loo hirgeliyo heshiiska doorashada.
Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu soo saaro wareegto xadideysa awoodaha fullinta ee madaxweynaha iyo tan sharci dejinta, meeshana laga saaraa dhamaan go’aamadii la saxiixay wixii ka dambeeyay sideedii Febraayo, xilligaas oo ay ku ekeyd muddo xileedka madaxweyne Farmaajo.
Waxaa kale oo uu maamulka madaxweyne Deni sheegay in xilka laga qaado taliyeyaasha ciidamada booliska, milateriga iyo agaasimaha hey’adda sirdoonka Qaranka, sidookalena la magacaabaa saraakiil kale, wadatashina laga yeesho magacaabidooda, maadaama sida ay sheegeen ay ku lug lahaayeen falkii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Puntland waxaa kale oo ay sheegtay in la dhiso guddi xaqiiq raadin ah oo baaritaan ku sameeya wixii ka dhacday magaalada Muqdisho 19-kii bishan Febraayo.
Beesha caalamka ayay sheegeen inay muhiim tahay inay qaadato door damaanad qaad ah, si loo hubiyo fullinta qoddobadii lagu heshiiyay.
Dhinacyada kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada ayay Puntland shegtay in laga qeybgeliyo shirarka doorashada looga arrinsanayo, shirarkaas oo ay aqbaleen inay ka dhacaan magaalada Muqdisho balse waxay shuruud uga dhigeen in lagu qabto ” goob ammaan ah” oo ay sheegeen in amnigeeda ay sugaan ciidamo lagu wada kalsoonaan karo.
Maamulka Jubaland ayaa iyaguna shuruudo kuwan lamid ah horay ugu xiray ka qeybgalka shirka, balse waxaa u dheeraa madaxweynaha dowladda federaalka oo ay sheegeen in laga saaro arrimaha doorashooyinka oo uusan wax dor ah ku yeelanin hannaanka doorashooyinka.
Mudada xil-heynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto.
Ilaa iyo hadda ma muuqato sansaan muujineysa in xitaa wadahadal laga yeelanayo khilaafka doorashada, maadaama Garowe iyo Kismayo ay ka qeybgalka shirka ku xireen shuruudo qaar laga yaabo in aysan u cuntamin dowladda federaalka.
Previous articleGudoomiye Ciro Oo Qaabilay Wafti Heer Caalami Ah
Next articleJamaal Khaashuqji: Mareykanka oo daabacaya warbixin ku saabsan dilkiisii
Jeneral fashiliyey Mudo-kordhintii Farmaajo Kulankii Barlamaankana Joojiyey+Hanjabaado uu ku saydhay Wasiir Dubbaha Warfaafinta Somalia
Ex Madaxwayne Sheekh Shariif oo Halis ku Tilmaamay Hadii Farmaajo Korodhsado 2sano
Xeerkii Furista Ururada Siyaasada oo 40 xubnood oo golaha wakiilada somaliland...
Geelaha Jabuuti oo 98% ku guulaystay doorashadii ka dhacday jabuuti
Farmaajo oo jaray Lacag & Gunno ay qaadan jireen Laba madaxweyne...
Daawo Cali Qoryoolay oo isbarbar dhigaya Awoodii Boqorkii Xayle salaase iyo...